Konke odinga ukukwazi ngemagnetosphere | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iplanethi yethu inamandla kazibuthe. Kuyaziwa ngegama le- inkambu ye-geomagnetic. Phakathi kokuhlukile izingqimba zomkhathi sithola ungqimba olunamandla kazibuthe womhlaba wonke. Lolu ungqimba lubizwa magnetosphere. Yilokhu okushiwo yindatshana yanamuhla. Sizokhuluma ngokuthi i-magnetosphere iyini, yenzelwe ini nokuthi ilusizo kanjani.
Uma ufuna ukwazi kabanzi ngemagnetosphere, lokhu okuthunyelwe kwakho.
1 Yini i-magnetosphere
3 Ukubaluleka kwe-magnetosphere
4 Ukuhluka kwensimu kazibuthe yomhlaba
Njengokungathi sikhuluma ngozibuthe osenkabeni yeplanethi yethu, amandla kazibuthe woMhlaba asebenza ngemisinga kagesi. Imisinga kagesi ikhiqizwa ngu lokho okubizwa ngokuthi yi-convection currents okwenzeka kufayela le- ingqikithi yangaphandle yeplanethi. Kulesi sisekelo sangaphandle sithola ukuhlangana okukhulu kwensimbi eyinsimbi ehamba kuso sonke isikhala ngenxa yomehluko wokuminyana. Le mizila yokudlulisa iyenzeka futhi engutsheni yoMhlaba futhi inesibopho sokuhamba kwamazwekazi.
Ngaphandle kokucabanga kwakho, engxenyeni engaphakathi yomhlaba kukhona izinga lokushisa eliphakeme. Ukube bekungengenxa yengcindezi yezinto, insimbi ibingancibilikiswa ngokuphelele. Noma kunjalo, akungenxa yengcindezi ebangelwa amandla adonsela phansi. Ngakho-ke, kumnyombo wangaphandle osendleleni engqimba yamakhilomitha ayi-2000, yebo iqukethe i-iron encibilikisiwe, i-nickel nokunye ukugxila okuncane kwezinye izinsimbi kusimo esimanzi. Ngokuthola ingcindezi encane kunezinye izinto kungatholakala kuncibilikile.
Umehluko ekushiseni okuyisisekelo, ingcindezi nokwakheka yikho okubangela imisinga ye-convection. Noma ngabe kubanda kangangani ngakho-ke ukucindezela okukhulu kuyacwila, udaba olufudumele luyakhuphuka. Kukhona nocingo amandla e-coriolis okuwumphumela we-spin yomhlaba obangela ama-eddy kule nhlanganisela yensimbi encibilikisiwe. Ngenxa yakho konke lokhu, kukhiqizwa imisinga kagesi ngaphakathi kweplanethi ekhiqiza amandla kazibuthe.
Izinsimbi ezikhokhisiwe ezidlula kulezi zinsimu bese zizakhela imisinga yazo kagesi. Lo mjikelezo, owenele, waziwa njenge-geodynamic.
Lapho sesazi ukuthi amandla kazibuthe womhlaba akhiwa kanjani, siyabona ukuthi i-magnetosphere iyona elawula amandla kazibuthe womhlaba. Ukuma kwale magnetosphere kuncike ekusebenzeni komoya welanga ngaso sonke isikhathi. Umoya welanga wenza uhlangothi olubhekene nalo lukhulele emabangeni acishe aliphinde izikhathi eziyinkulungwane ibanga eliphakathi kwelanga nomhlaba. Lesi sibhakabhaka esikhulu se-magnetosphere saziwa njengomsila kazibuthe.
Ubukhulu bamandla kazibuthe abufani kuwo wonke amagagasi omhlaba. Isibonelo, amandla aphansi kakhulu e-Equator futhi aphezulu kakhulu ezigxotsheni. Umkhawulo wangaphandle we-magnetosphere, njengakwezinye izingqimba zomkhathi, ubizwa ngokuthi yi-magnetopause. Singasho ukuthi isakhiwo se-magnetosphere sinamandla amakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi kuncike kakhulu ekusebenzeni komoya welanga. Izigxobo zamagnetic azifani nezigxobo zokuhlala. Kunomehluko olinganiselwa ku-11 degrees phakathi kwabo. Kunezifundo eziningi ososayensi abazitholile ngoshintsho lwendlela ohlangane nayo ngamandla kazibuthe. Isimo samanje esisenyakatho kazibuthe singaphezu kwamamayela angama-600 ukusuka lapho sasikhona ekuqaleni kwawo-XNUMX. Ijubane labo kutholakale nokuthi lenyuke ngamamayela angama-40 ngonyaka.
Kunamarekhodi amaningi wokuma komhlaba, ikakhulukazi wokuma kwamatshe, akhombisa ukuthi le nsimu kazibuthe iguqulwe ngokuphelele kaningana kaningana eminyakeni eyizigidi ezingama-500 edlule. Ekuguqukeni ngakunye, izingongolo zikazibuthe zivame ukutholakala emaphethelweni ohlangothini lweplanethi. Lokhu kungadala ukuthi ikhampasi ejwayelekile ikhombe esigxotsheni esiseningizimu esikhundleni sesigxobo esisenyakatho.
Njengoba sishilo phambilini, kunomsebenzi welanga obizwa ngumoya welanga. Lo moya welanga umane nje ungumsinga wezinhlayiya ezikhokhiswa amandla e-radioactive avela elangeni. Ngenxa yobukhona bemagnetosphere siyakwazi ukubona lo moya welanga ngaphandle kokulimaza impilo yethu. Sijwayele ukubona lo moya welanga njengezibani ezisenyakatho neziphepho ze-geomagnetic. Uma kungenjalo ngalolu ungqimba, kungalimaza zonke izinhlelo zethu zokuxhumana ezifana neziphuphutheki nezinhlelo zamagagasi omsakazo. Ukube emkhakheni kazibuthe womhlaba besingeke sibe nomkhathi futhi, ngakho-ke, amazinga okushisa omhlaba angahluka ngendlela efanayo nakwenzayo ebusweni benyanga. Lokho kusho ukuthi, emazingeni okushisa ahlukahlukene kusuka ku-123 kuya ku-153 degrees.
Kunezilwane eziningi njengezinyoni nezimfudu ezinekhono lokuthola amandla kazibuthe womhlaba futhi zikusebenzise ukuzulazula phakathi nezikhathi zokufuduka. Futhi inokubaluleka okukhulu ekusetshenzisweni kocwaningo lwama-geologists ukuphenya ukwakheka kwamatshe angaphansi komhlaba. Abaphenyi yibo abafuna uwoyela, igesi noma okumbiwa phansi futhi ngenxa yale nsimu kazibuthe bangakuthola kalula. Njengoba la mafutha eyisisekelo samandla omhlaba kubantu, siyabona ukubaluleka kwe-magnetosphere.
Ukukufingqa kafushane, singasho ukuthi amandla kazibuthe ayadingeka ukuze iplanethi isekele impilo.
Ukuhluka kwensimu kazibuthe yomhlaba
Le nsimu kazibuthe a inokuhluka okuncane esikhathini samahora angama-24. Ukwehluka kuthinta kakhulu indlela ikhampasi ekhomba ngayo. Lo mehluko ubonakala kuphela eshumini sesibindi futhi umfutho ophelele uphazanyiswa kuphela yi-0,1%.
Yize kungasebenzi ngaso sonke isikhathi ngendlela efanayo, ukuhluka kukazibuthe kunamaphethini athile. Iphethini enkulu ukuhlobana okukhona nesikrini selanga futhi okuhlala isilinganiso seminyaka eyishumi nanye.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-magnetosphere nokubaluleka kwayo empilweni emhlabeni.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ciencia » Magnetosphere